I-Apple ipapasha ukhenketho olukhokelwayo ngeendaba ze-iPhone 13 entsha | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 18/09/2021 13:16 | iPhone 13, Izaziso
Ukugcinwa kwe-iPhone 13 entsha kwaqala Izolo kwaye nge-24 kaSeptemba, iiyunithi zokuqala ziya kuqala ukufika kubanini bazo. U-Apple ukhethe ii-smartphones ezintsha ezixhaswe yi-chip entsha ye-A15 Bionic kunye neekhamera ezenziwe ngokutsha ezinakho ukurekhoda iividiyo kwiProRes kwaye zide zirekhode iifoto ezifanelekileyo ngokwahlulahlula ezo ziphazamisayo kwimowudi yeCinema. Nangona zonke iindaba zichazwe kakuhle kwaye zaphuhliswa kwiwebhusayithi esemthethweni, U-Apple upapashe ividiyo entsha ngohlobo lokhenketho olukhokelwayo olubalaselisa ezona zinto ziphambili zangoku ze-iPhone 13.
Izinto eziphambili ezinqabileyo ze-iPhone 13 ziyavela kukhenketho olukhokelwa yi-Apple
Ifoto ixabisa iwaka lamagama kwaye iApple iyazi ngentloko. Kungenxa yoko le nto uthumele ifayile ye- Uhambo olukhokelwayo lokuqaqambisa into entsha kwi-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 Pro Kuzo zonke iimodeli zayo. Kuyo yonke ividiyo siyabona ukuba zingeniswa njani iimpawu zobugcisa zezixhobo ukuze zithathe amanyathelo. Ungayibona imo yeCinema isebenza, imizekelo apho uxinzelelo lwe-iPhone 13 lubekwa kuvavanyo okanye imizekelo yokusebenza kweekhamera ezintsha.
Ngapha koko, ukhenketho lwahlulwe lwangeniswa kwinkcazo yezobuchwephesha kwiimodeli ezine ezikhoyo. Okulandelayo kuyaqhubeka ukubonisa ukusebenza kwemo yeCinema kunye nokujonga ubunzima besixhobo kunye nokumelana nolwelo. Emva koko, isikrini esitsha se-Super Retina XDR sibonakalisiwe kwaye i-autonomies yeebhetri iyahlaziywa. Kwaye, ekugqibeleni, ufikelela kwicandelo lokufota apho izitayile zokufota, ukusondeza kwidijithali kunye nemowudi yeMacro ye-iPhone 13 Pro ibonakala.
Le yindlela enomdla evela kwiApple ukuzisa i-iPhone 13 specs kufutshane nabasebenzisi Ngevidiyo ebonakalayo kunye nekhokelwayo apho abasebenzisi kunye nomqeshwa weBig Apple banokubonwa beqondisa umsebenzi. Kungenzeka ukuba kwizixhobo ezizayo siza kubona into efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » I-Apple ipapasha ukhenketho olukhokelwayo kunye neendaba ze-iPhone 13 entsha